यि हुन सबै भन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली नायिकाहरू… – ईमेची डटकम
यि हुन सबै भन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली नायिकाहरू…
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता नायिकाहरू पनि छन् जुन नायिकाहरू एकदमै सर्वगुण सम्पन्न रहेका छन् । एउटा राम्रो नायिकामा अभिनय र आवाज सँगसँगै उसको नृत्य पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । नेपाली चलचित्रका अधिकांश गीतहरूमा कविराज गहतराजको कोरियो ग्राफ देखिन्छ । लोकप्रिय कोरियोग्राफर कविराजले थुप्रै नायिकाहरू सँग थुप्रै गीतको कोरियो ग्राफ गरिसकेका छन् । तर कविराज चलचित्र क्षेत्रको गतिविधि बाट सन्तुष्ट चैँ छैनन्। आज हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने १० नायिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
१०. केकी अधिकारीः
केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चित र व्यस्त नायिका हुन् । उनी राम्रो अभिनय मात्र नगरेर निकै राम्रो नाच्छिन् पनि । केकी अधिकारीले डान्स गर्दा निकै राम्रो एक्सप्रेशन दिने गरेकी छिन् । जसले दर्शकलाई मोहित बनाउने गरेको छ ।
९. रेखा थापाः
रेखा थापा कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् । रेखा पनि अभिनयमा मात्र नभएर डान्समा पनि पोख्त छिन् । उनले जस्तो खालको डान्स पनि सजिलै गर्न सक्छिन् । त्यसैले उनलाई राम्रो नाच्ने नायिकाको रुपमा हेरिन्छ ।
८. जसिता गुरुङ:
जसिता गुरुङ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएको धेरै समय भएको छैन । तर उनको फ्यान फलोइङ भने निकै राम्रो रहेको छ । जसिता गुरुङ पनि निकै राम्रो नाच्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
बेनिशा हमाल सानैदिन नाच्नमा पोख्त थिइन् । उनलाई शास्त्रीय नृत्य गर्न खुब मनपर्छ । बेनिशाले धेरै शास्त्रीय नृत्य गर्ने गरेकी छिन् । त्यसबाहेकका अरु डान्स फर्म पनि उनले गर्न सक्छिन्
६.साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह:
साम्राज्ञी निकै राम्रो नाच्छिन् । त्यसबाहेक उनको एक्सपेशनले सबैलाई भुतुक्कै बनाउँछ । साम्राज्ञी पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
म्यूजिक भिडियो हुँदै चलचित्रमा आएकी नायिका शिल्पा पोखरेल पहिलेदेखि नै नाच्न सिपालु थिइन् । डान्स गर्दा उनको एनर्जी निकै राम्रो रहेको हुन्छ ।
४. स्वस्तिमा खड्का:
स्वस्तिमा खड्काको कुरा गर्ने बित्तिकै सबैलाई सुरुमा कुटु मा कुटु गीत नै याद आउँछ । उनले कुटु मा कुटु गीतमा निकै राम्रो नाचेकी पनि थिइन् । त्यहाँ बाट नै उनले राम्रो नाच्छिन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
३. निता ढुङ्गाना :
निताको डान्सको फ्यान निकै रहेका छन् । उनले आफ्नो डान्सले नै दर्शकको असाध्यै माया पाएकी छिन् । उनको डान्समा पनि एक्सप्रेशन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
२. आँचल शर्मा:
नायिका आँचल शर्माले थुप्रै डान्सिङ गीतहरुमा नाचिसकेकी छिन् । उनले पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्छिन् । उनको डान्सको फ्यान धेरै रहेका छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमाा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने नायिकाको लिष्टमा प्रियंका कार्कीको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । प्रियंका निकै राम्रो नाच्ने गर्छिन् । उनी एक रियालिटी शो को जर्ज समेत बनिसकेकी छिन् । उनले हरेक प्रकारका डान्स गर्न सक्छिन् ।